Sida loo isticmaalo macruufka Emulator u Android | Android Emulator
Mirror iyo Emulator
Mirror Android inay PC
Mirror la Chromecast
Mirror Android inay TV
Mirror PC in TV
Mirror Android inay Android
Apps in Mirror Android
Control Android on PC
Games Android on PC
Emulators Android u PC
macruufka Emulator u Android
Best Game Emulators Android
3 Qaar kale
Aqoonta ku saabsan J5
Sida lays mobile waxaa dardar, codsiyada ayaa noqotay ganacsiga ugu sareeya ee labadii nidaamyada hawlgalka mobile, android iyo macruufka. Waxa ay tartan ku kala in xitaa waxaa ka mid ah, wax-qabadka, qaababka, isticmaalka iyo ka shaqeeya. Android lagu horumariyo by Google halka macruufka waa Apple ee ilmaha, android waa il furan halka macruufka ee helitaanka waa xadidan tahay. Codsiyada Android ayaa laga heli karaa Google Play Store iyo codsiga macruufka laga heli karaa Apple App Store. Inkasta oo codsiga mobile ee nidaamka qalliinka ayaa sida caadiga ah loo Laab laabi, si loo waafajiyo labada nidaam, waxaa jira qaar ka mid ah codsiyada macruufka ah in aad weli ma heli karaa Android iyo qeybsanaan.
Tartamada oo waxa uu ka dhigayaa kala duwan oo ka mid ah laba nidaam ayaa xaqiijisay in ay samayn wadaagaan codsiyada isku mid ku suntan. Android hadda ku raaxaystaa caan ka mid ah dadka isticmaala mobile halka macruufka sii suuqa ay diirada u xadidan. Inkastoo dad badani u muuqdaan in ay doortaan Android, waxay rabaan in ay dareemaan waayo-aragnimo codsiga macruufka on qalabka ay android. Horumarka joogtada ah ee technology hadda fulinta riyadii dad badan oo isticmaala android la macruufka emulator u android. Kasta oo user android soo dejisan kartaa emulator android macruufka.
macruufka Emulator u baahan yahay Android
• Video xawaaraha: wadaago darawalka yaruna iyadoo malag hoggaamin X la xiriira; OpenGL, ES / EDL
• Kaydinta: 61MB for files App
• HDMI: video-out la framebuffer sare qalab
• hab USB oo ciidankii
• 512 MB ​​RAM
1. file ka link Download halkan, http://files.cat/OCOcYpJH download faylka si aad PC
2. Ka dib markii download waa dhameystiran, file ka soo dejisan soo dir aad casriga via USB / Bluetooth, ama hab kale oo wax kasta oo aad jeceshahay. Geedi socodka waa ka dhaqso marka la USB sameeyo.
3. Barkinta USB ka aad casriga ah iyo raadiyo file ah.
4. Waxaa rakib by furaan in aad barnaamijka Tababaraha file
5. Wuxuu furaa ,, Padoid "icon, Waxaad la qaadi doonaa si ,, Select Rooma ah" Section. Just ku shuban kulan ee halkan. Qalab ka link siiyey taageertaa ipas iyo siibadaha.
6. Ku raaxayso ciyaaro macruufka on android.
Ka dib marka aad ku dhameysan rakibidda iyo dhan waa si fiican. Taas macnaheedu waa in aad hadda ku raaxaysan kartaa kala duwan oo aan xad lahayn oo aad kala dooran marka ay timaado codsiyada. Haddii codsi lagu helaa oo keliya ee macruufka ah oo aan u Android, ama version macruufka way ka wanaagsan tahay version Android, aan waa mid ka mid ah dhibaatooyinka. macruufka emulator u Android asal ahaan sameeyay codsiga interface ka binary nidaamka hawlgalka shisheeye ah, haddii ay taasi, macruufka. Tani waxay markaas ka tago qolka qalab Android inay ordi codsiga macruufka ah unmodified. Emulator ayaa dareensan in Real marka la isticmaalayo aad codsiyada, siinta waayo-aragnimo la mid ah in user macruufka ah dareemi doonaan isticmaalay in si gaar ah aad rabto in aad rakibto telefoonka aad Android.
Iyada oo amarka ka mid ah saamiga aad suuqa 75%, mid la weydiinaya sababta ay u noqon doono in la heli codsiga lagu sameeyo oo ay Gordhaw Kadhoofaan laakiin ma heli karo Android. Sababaha ku kalifay waxaa ka mid ah, deegaanka ee Apple. Inta badan dadka isticmaala, si wadajir ah ula horumarinta jeclaan lahaa jawi u xiran yihiin Apple oo waxaa si adag gacanta. Xaqiiqada ah in macaamiisha macruufka diyaar u yihiin in ay bixiyaan codsiyada ay ka duwan u Android taas oo horseedaysa dakhli dheeraad ah oo ay ku dhiirigelinayaan in app iyo shirkadaha taageero ay. Caqli ahaan, horumarinta badan oo ku saabsan horumarinta codsiyada wanaagsan ee macruufka badan Android xoogga. More sidaas ugu kulan oo caan ah in ay leeyihiin gaadiidka weyn. Si aad u top oo dhan, nidaamka dheer ee geedi socodka ansixinta Apple ee codsiga hubinayaa codsiyada tayo leh la uploaded. In badan oo user filayaa kaliya codsiyada oo tayo leh, cadaadis badan tahay in app sameeysa macruufka ah si loo hubiyo tayada in ay wax soo saarka, tartan sidaas dheeraad ah iyo barnaamijyadooda in siin waayo-aragnimo dheeraad ah oo xiiso leh. .
Sababaha kor ku siin hogaanka dabiici ah macaamiisha Android / isticmaala inay rabto in dareenka ka mid ah codsiyada macruufka inkastoo aan iibsan iPhone ama iPad. Waxa ay xoogga saareysaa on naqshadda dhismaha in iyaga ka dhigaa inay xiiso leh. Tani waxay u qaadan uusan dhammaan codsiyada macruufka ka khayr badan kuwa Android in kastoo. macruufka emulator u Android sidoo kale waa fiican ee horumarinta kuwaas oo doonaya inay tijaabiso codsiyada macruufka iyaga oo aan la isticmaalayo qalab Apple ah, jarida kharashka gadashada.
Inkasta oo qodobkan waxaa loola jeedaa mid qalab gaar ah inuu noqdo sida macruufka ee Android. Waxaa jira mashaariic badan oo ay leeyihiin iyo kuwa weli emulators macruufka ah ee Android, Halkan ka siinaya kala doorasho ballaaran si ay u doortaan iyada oo suurtagal ah oo loo helo xitaa qaar ka mid ah in ay yihiin u iibiyay iyo kuwo lacag la'aan ah. Inta badan qalabka emulator Android macruufka la iman doonaa xeerarka ku saabsan sida loo isticmaalo, idin siinayo tallaabo by nidaamka tallaabo taas oo kala duwanaan karaan mid ka mid ah la siiyey in this article. Fursada ugu fiican mar walba waa in la isbarbardhigo ee qaab tijaabo ah oo ama xitaa eegto dib u eegista ay macaamiisha qaar ka mid ah iyo in aad ku siinayaa faham guud ee faa'iidada iyo khasaaraha ka mid ah qalabka labadaba. Iyadoo horumarinta joogtada ah ee technology, qalabka sidoo kale ka warbixisay oo noqotay mid sii cajiib ah, siinta waayo-aragnimo user fiican.
Wondershare MirrorGo - Mirror qalab android si aad u computer
Play Android Mobile Games on your computer iyadoo aad keyboard iyo Mouse gacanta ku fiican
Dir oo aad hesho farriimo la isticmaalayo keyboard computer`s ku jiraan SMS, WhatsApp, Facebook iwm
View badan farriimaha isku mar soo gaaray telefoonka aan
Isticmaal barnaamijyadooda android aad kombuutarka waayo-aragnimo shaashad buuxda
Connect phone Android la MirrorGo
Play Android Mobile Games ee PC
Bedelka files dhexeeya PC iyo Mobile
Talo & Tricks u Android Mirror
10 Features Brilliant Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan Apple macruufka 9
Sida loo nadiifi iPhone / iPad / iPod taabto si rakib macruufka 8
> Resource > macruufka > Sida loo Isticmaalo macruufka Emulator u Android